Legacies of Panglong | Just Another WordPress Blog
Legacies of Panglong
ပင်လုံ အမွေအနှစ်၏ ကျေးဇူးတရားများ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ၏ ပြည်ထောင်စု အရေး
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ က နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော် တစိုက်မတ်မတ်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြသည်မှာ မိမိတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်း ပိုင်ခွင့် တို့ကို ပြန်လည်ရရှိရေး ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ၏ အခွင့်အရေးများကို နိုင်ငံရေးအရ အာမခံချက် ရှိ သော ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု စနစ်အားဖြင့် သာလျင် ဖေါ်ဆောင် နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုလည်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကိုတည်ဆောက်မှသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ (ဂဂ) မျိုးဆက်များ က ပြောဆို ရေးသား လာကြသည်။ လက်ရှိ ၂ဝဝဂ အခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ၏ လိုလား ချက် များ နှင့်မကိုက်ညီ ကြောင်း အစိုးရဖက် နှင့် စစ်ဖက် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ က လည်း ဝန်ခံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း မီဒီယာများမှ တဆင့် ထောက်ပြကြသည်။ ၂ဝဝဂ ခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တရပ်လုံး ၏ ယုံကြည်မှု ကိုးစားမှု နှင့် ဆက်စပ် နေကြောင်း ဖေါ်ပြလာကြသည်။ လူနည်းစု ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ၏ ပြည်ထေင်စု အရေးကို လူများစု ဗမာတိုင်းရင်းသား များမှ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် (၆ဝ) ကျော်ကာလ အတွင်း ယနေ့ ကာလကဲ့သို့ အားနှင့်အင်နှင့် ထုနှင့်ထည်နှင့် ရေးသား ပြောဆို ဆွေးနွေးမှု များ မရှိခဲ့ဘူး ပေ။ ရှိခဲ့ဘူးပြန်လျင်လည်း အာဏာရှင် စစ်အစိုးရတို့၏ ဝါဒဖြန့်ချီရေး များသာဖြစ်ပြီး ဆားမပါသော ဟင်းကိုစားရသလို အနှစ်မဲ့ကာ မြိန်ယှက်မှု မရှိခဲ့ပေ။ ယနေ့ မီဒီယာ များ လွတ်လပ်လာသည်နှင့်အမျှ အိုင်ဒီယာများ၊ အယူအဆများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်မှု မြင့်တက်လာကာ လူငယ် မျိုးဆက်သစ် တို့ အကြား အတွေးသစ် အမြင်သစ်များ၊ ရှုထောင့်အသစ်များ၊ ရပ်တည်ချက် အသစ်များဖြင့် နိုင်ငံရေး ရေချိန်တို့လည်း ယခင်ကနှင့်မတူ မြင့်တက် နိုးကြား လာသည့် သဘော ဖြစ် သည်။ လတ်တလော ကာလတွင် အကောင် အထည် ဖေါ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲ အဟန့်အတားများရှိနေ သေးသည့်တိုင်အောင် တနေ့ တချိန် မကြာတော့သောကာလ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အတွက် အားတက် စရာဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအရေးသည် ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ၏ အရေး သက်သက် မဟုတ်ပဲ အများစု ဖြစ်သော ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့ ကပါ တက်တက်ကြွကြွ ဦးဆောင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရေးအဖြစ် သဘောပေါက် လာကြသဖြင့် လူများစု အတွက်ရော လူနည်းစုတို့ အတွက် ပါ တတိုင်းတပြည်လုံး၏ အနာဂတ်အတွက် ကောင်းသော လက္ခဏာ တရပ် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားသော ပြည်ထောင်စု ခေတ်သစ်ဆီကို ဦးတည်သည့် ပြန်လည် စုစည်းမှု အမှတ် လက္ခဏာတရပ် ပင်ဖြစ်သည်။ ပင်လုံ ကတိကဝတ် တို့၏ အခြေခံပေါ်တွင် ပြည်ထောင်စု ရေးရာ၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ၊ အတွေးအခေါ်ရေးရာ အရ ပြန် လည် ဆုံစည်း လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပင်လုံ အမွေအနစ် မှရရှိသော ဆုမြတ် နှင့် အကျိုးကျေးဇူးတို့သည်ယနေ့ထိတိုင်အောင် အားကောင်းဆဲ၊ မောင်းသန်ဆဲ၊ စည်းလုံးမှု၊ စုစည်းမှုတို့ကို ပေးနိုင်ဆဲ၊ သက်ရောက်မှု ရှိနေဆဲ ဖြစ် သည်။
ကျောက်ကောင်း တလက်၊ သူရဲကောင်း တဦး
ကျွန်တော်တို့၏ နိုင်ငံသမိုင်းတွင် တချိန်တခါက ပင်လုံတွင် တတင်္ဂအားဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ဘူးသည့် စုစည်းမှုမျိုး ယခုတဖန် “ပြန်လည်” မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ တချိန်တခါက ဗမာ တိုင်းရင်း သား များ ထဲမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဟူသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်ထူးတဦး တယောက် ၏ ကြီးမား သော အမျှော်အမြင်တခု ဖြစ်သော်လည်း သူ ကိုယ်တိုင် နှစ်နှစ် ကာကာ အသက်ပေး ချစ်ခဲ့ရသော ဗမာ အပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံးအတွက် ကုန်လွန်ခဲ့ သော အနှစ် (၆ဝ) ကျော် အတိတ်ကာလတွင် တဦးတည်း ကြိတ်ခါ ကြိုကြိုတင်တင် မက်ခဲ့ရသည့် ငြိမ်းချမ်း ရေး အိပ်မက် ဟောင်းတို့သည် လူမိုက်တို့၏လက်ထဲတွင် ရေတိမ်မြုပ်ကာ ပြည်ထောင်စုအဝှမ်း ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ပြီး ဗမာအပါအဝင် ဖြစ်သော လူမျိုး ပေါင်းစုံပြည်သူတို့ သွေးချောင်းသွင်သွင် စီး ခဲ့ရသည်။ ယင်း အာဇာနီ သူရဲ ကောင်းကြီး၏ ငြိမ်းချမ်း သော ပြည်ထောင်စုကြီး ထူထောင်ရေး အတိတ် အိပ်မက်ဟောင်းတို့သည် ယနေ့ မြန်မာ လူငယ် မျိုးဆက် သစ် တို့၏ အနာဂတ် အိပ်မက်သစ် တခု အဖြစ် နွံထဲမှ ပြန် ပေါ်လာသည့် ကျောက်ကောင်းပမာ အသစ်တဖန် ပြန်လည် လှုပ်ရှား ရှင်သန် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ကောင်းမှန်လျင် နွံမှာနှစ်သော်လည်း မညစ် သကဲ့သို့၊ စစ်မှန်သော အာဇာနည် သူရဲ ကောင်းတို့သည် လူသေသော်လည်း သူတို့၏ နာမည် နှင့် အတွေးအခေါ် တို့သည် တိမ်ကော ပျောက်ကွယ် ရိုးထုံးစံမရှိပေ။
ကမ္ဘာနှင့်ချီပြီး ကြာမြင့်သွား ရသည့် ပင်လုံ ခရီး
အာဘရာဟမ်လင်ကွန်းကပြောခဲ့ဘူးသည်မှာ “သစ်ပင်တပင်ကို ခုတ်လှဲဖို့ အချိန် (၆) နာရီပေးပါ၊ ပထမ (၄) နာရီအတွင်း ပုဆိန်ကို ကျွန်တော်သွေးမယ်”ဟူ၏။ အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်း ရွံမုန်း၊ ဖက်ဒရယ် ဆိုပြန်တော့လည်း အကြောက်ကြီးကြောက်၊ “ဖက်ဒရယ် ခွဲထွက်ရေးမူ” ဟူသောတုံးနေသည့် ပုဆိန်ဖြင့် အပင်အို ကိုခုတ်လှဲ ရန် ကျိုးစားခဲ့ကြဘူးပြီ။ ချွေးထွက်သာများခဲ့သည်၊ စည်းလုံးမှု၊ စုစည်းမှုတို့ ကိုမဆောင်ကျဉ်း နိုင်သဖြင့် လွတ်မြောက်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မတက်လှန်းနိုင်ခဲ့ကြပေ။ အပင်အိုကတော့ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ခဲ့။ အာဘရာဟမ် လင်ကွန်း ၏အလိုအရဟူမူ ပထမ (၄) နာရီအတွင်းပုဆိန် ကိုသွေး လိုက်ခြင်းသည် တချက်ပင်မခုတ်ရသေးသော အပင်အိုအား ထက်ဝက်မျှ ခုတ်ထားပြီး သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သစ်ပင်ကို သဲကြီးမဲကြီးခုတ်ထစ်ခြင်း ထက်၊ ယင်းသစ်ပင်ကို အမြန်ဆုံး အပြီးသတ် ခုတ်လှဲနိုင်ရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးနှင့် ပထမဦးဆုံး ဦးစားပေး ပြုလုပ်ရမည့် အလုပ်မှာပုဆိန် ကိုထက်မြက် နေအောင် ဦးစွာပထမ သွေးထား သည့် အလုပ် ဖြစ် သည်။ ထက်မြက်သော ပုဆိန် နှင့်တူသည့် ထက်မြက်သော ပင်လုံ အတွေးအခေါ် နှင့် ဖက်ဒရယ်ပူးပေါင်းရေးမူ အားဖြင့် သာလျင် ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု ကြီးကို အလျင်အမြန် မျက်မောက်ပြုကာ စစ်ပွဲများငြိမ်းသော စည်းလုံးသော ပင်လုံနိုင်ငံတော်ကြီးကို ကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် တင့်တယ် စွာ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးမပြု နိုင်ခဲ့ ကြသဖြင့်၎င်း၊ အသုံးပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသဖြင့်၎င်း၊ “ဖက်ဒရယ် ခွဲထွက်ရေးမူ” ဟူသော အာဏာရှင် ၏ မှိုင်းတိုက်သွေးခွဲမှု ကို ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီပြီး ရိုးသားသော ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့ အယုံကြီး ယုံမိခဲ့ကြဘူးပြီ။ ဤသို့ဖြင့် ပြည်သူတို့၏ ပင်လုံ တကျော့ပြန်ခရီး သည် နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော် ဟူသည်မှာ သက်တမ်းတရာ သာရှိသော လူသား များအတွက် ကမ္ဘာနှင့်ချီပြီးကြာမြင့် သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် စစ်မက်ပဋိပက္ခများ ကင်းရှင်းသော၊ ငြိမ်းချမ်းသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုထူထောင်ရန်အတွက် ချစ်ခင် လေးစား အပ်သော ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့် လွန်းခဲ့ပြီ ဖြစ် သော်လည်း ဗမာတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို တို့သည် အာဏာရှင်၏ လှည့်ဖျားမှု ကိုအလွယ်တကူ ယုံစားမိခဲ့ကြသဖြင့် မကြာသင့်ပဲ ကမ္ဘာ နှင့်ချီကြာညောင်း ခဲ့ရ သည်။ ရှည်ကြာသော ပြည်တွင်းစစ်ကိုပင် တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ဟူ၍ တမျိုး၊ လူမျိုးစု ပြဿနာ ဟူ၍ တဖုံ မှားယွင်းစွာ ကင်းပွန်းတပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရေး တောင်းဆိုသူများကိုလည်း အဖျက်သမားများ၊ ခွဲထွက်ရေးသမား များအဖြစ် အပုတ်ချခဲ့ကြသည်။ အမှန် တကယ် တွင်မူ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတို့ စတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပြဿနာ မဟုတ်မူပဲ ဗမာ တိုင်းရင်းသား တို့၏ ရိုးသားစွာမသိနားမလည်မှု ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသော ဗမာ တိုင်းရင်းသား တို့၏ ပြဿနာ၊ တနည်းအားဖြင့် ဗမာပြဿနာ သာဖြစ်ပေသည်။ ဗမာ ကျောင်းသား လူငယ်များ က ဦးဆောင် ခဲ့ပြီး၊ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတရပ်လုံ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည့် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး ၏ အရှိန်အဟုန်အားဖြင့် အာဏာရှင်၏ “ဖက်ဒရယ်၊ ခွဲထွက်ရေးမူ” ဟူသည့် ယုံတမ်းစကား ဖြင့် အစီအစဉ်ရှိရှိ တည်ဆောက်ထားခဲ့ သော အမှောင်တိုက် မောဟ တံတိုင်းကြီး သည် လည်း ပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ အမြင်သစ်များ ပွင့်လင်းလာသောခေတ်တွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပြန်လည် ထူထောင် ရေး သည် ကမ္ဘာ နှင့်ချီပြီးထပ်မကြာသင့်တော့ပေ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ က ပုဆိန်ကိုထက်နေအောင် သွေးထားပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းပုဆိန်ကို လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ ယနေ့ ကောက်ကိုက်လိုက်လျင် ပြည်သူတရပ်လုံး အငမ်းမရမျှော်မှန်းခဲ့ကြရသည့် ငြိမ်းချမ်း သာယာ သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုမနက်ဖန် ဧကန်မလွဲ မျက်မောက် ပြုနိုင်ကြတော့မည်ဖြစ်သည်။
ပင်လုံ နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ အတွေးအခေါ်
ပင်လုံ ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် လူတော်တော်များများက ရှမ်းပြည်တွင်ရှိသော ပင်လုံ အမည်တွင်သည့် နေရာ၊ဒေသ ကို၎င်း၊ ပင်လုံစာချုပ် ကိုရေးထိုးခဲ့ကြသည့် ၁၉၄ရ ခုနှစ် အချိန်ကာလလေးတခု ကို၎င်းပြေး၍ တွေးမိ မြင်မိ ကြပေလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ ပင်လုံဟူသော စကားလုံးသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေးသမိုင်း တွင် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးဝေါဟာရ တရပ်ဖြစ်ပြီး နေရာ၊ဒေသ နှင့် အချိန် ကိုသာ ရည်ညွှန်း နေသည်မဟုတ်ပေ။ ပင်လုံဟူသည့် စကားလုံးတလုံးကို နိုင်ငံရေးဝေါဟာရ အမြင်ဖြင့် ချည်းကပ် အဓိပ္ပယ်ဖွင့်မည်ဆိုလျင် “ပင်လုံ” ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် တန်းတူရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ပူးပေါင်းရေး၊ ပြည်ထောင်စုအရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး စသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ (Universal Democracy) အယူအဆများ ကို “ပင်လုံ” ဟူသော စကားလုံး တလုံးတည်းကို umbrella term တခုအဖြစ်သုံးပြီး principles of democracy ခေါ် ဒီမိုကရေစီ တရား များကို ပေါင်းချုပ်၍ပြောဆို ရေးသား လိုက်ခြင်း သာ ဖြစ်သည်။ “ပင်လုံ” ဟူသည့် နိုင်ငံရေးဝေါဟာရ တွင် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ အပြန်အလှန် အသိအမှတ် ပြုမှု များ စသည့် ငြိမ်းချမ်း သာယာ သော ပြည်ထောင်စု တခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင် ထူထောင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး အနှစ်သာရများ ပါရှိ နေပါ သည်။ ပင်လုံ နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ (Universal Democracy) အယူအဆများ သည် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆက်နွှယ် နေသည်ကို မျက်ဝါး ထင်ထင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တကြိမ်တည်းတွင် ပင်လုံ ဟူသည်မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ (Universal Democracy) အယူအဆများ ကိုအခြေခံသည့် မိမိတို့ ၏ အမိပင်လုံပြည်ထောင်စု ကြီး နှင့် လက်တွေ့ကျကျ ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေ စီ၏ အခြေခံတရား များလည်း ဖြစ်ပေသည်။ (Universal Democracy) ဟူသည်မှာ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်၊ အရှေ့တိုင်းဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ် ကမ္ဘာ့ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြေက် မည်သည့်အရပ်တွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယန်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွတ်စလင်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ အစရှိသည့် ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးများ အနက် မည်သည့် ဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သို့သော မိရိုးဖလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု များကို ပိုင်ဆိုင်ကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာ နှင့် မိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှုများ ကိုစွန့်လွှတ်စရာ မလိုပဲ မိမိတို့၏ ရေခံမြေခံ ပကတိ အရှိတရားများ၊ သမိုင်းကြောင်းများ နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဖေါ်ဆောင်ကာ ပြည်သူတို့အတွက် နိုင်ငံရေး ခွန်အားတခုကို ဖြည့်တင်းပေး ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။(၁)
တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံ ဟူသည်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှပုံတူကူးချထားသည်လည်းမဟုတ်၊ ဥရောပ အနောက်တိုင်းမှ ပုံတူကူးချကာ တင်ပို့ခဲ့သည် လည်းမ ဟုတ် သော ပင်လုံ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား များ အတူတကွ ပြန်လည် ထူထောင်လတ္တံ့သော ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး ၏ ရေခံ မြေခံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် သဟဇာတ ကျသည့် ပင်လုံခြံထွက် ဒီမိုကရေစီ homegrown Panglong democracy သာဖြစ်ပေသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို စတင်ထူထောင်စဉ် က အမေရိကန်မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး များ တွေးခေါ်ခဲ့ကြသော Jersonian Democracy, Madisonian Democracy အစရှိသည်တို့ နှင့်မခြား၊ ဗမာမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် တွေးခေါ်ကာ ကျွန်တော်တို့ ၏ ခေတ်သစ် ပြည်ထောင်စုကြီး ကိုစတင်ထူထောင်ရန်အတွက် ချမှတ်ခဲ့သည့် ပင်လုံ ဒီမိုကရေစီ Panglong Democracy သည် အခိုင်အမာ အထင်အရှား ရှိခဲ့ပါ သည်။ ကိုယ့် သမိုင်း ကို ကိုယ်မေ့ပျောက်ထားရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ World class leader ခေါ် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်က သူချစ်သော ဗမာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတရပ်လုံး ကမ္ဘာ နှင့် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရင်ဘောင်တန်း နိုင်မည့် အဆင့်မြင့် ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်တရပ်အတွက် ပင်လုံတွင် အုပ်မြစ်ချပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ မြင်တွေ့ နေကြရသည့် အညံ့စား ရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီ မျိုးနှင့် မိုးနှင့်မြေ ပမာ ကွာခြားလွန်းလှပါသည်။
ဖြိုလှဲရိုက်ချိုး၍မရသော သမိုင်း ကျောက်တိုင်
ပင်လုံ အမွေအနှစ် မှရရှိလာသော ဆုမြတ် ကျေးဇူးတရား များ သည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် အဘိုးမဖြတ်နိုင် လောက် အောင် ကြီးမား လှသော်လည်း ယင်းအကျိုးကျေးဇူး တို့ကို မမြင်နိုင်ပဲ အပေါ်ယံကြည့်ကာ မဟုတ်မတရား ပြောဆို ဝေဖန်မှု များလည်း ရှိပါသည်။ တချို့က ပင်လုံ ခေတ်ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြသည်။ အမှန်မှာ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော်ကာလတွင် တိုင်းပြည်၏ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေးတိုင်း ပင်လုံကို အကြိမ်ကြိမ် ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသည့်အပြင်၊ ယနေ့အထိလည်း ပင်လုံ၏ မူ တို့သည် ခေတ်မမီ တော့ကြောင်း အချက်အလက်နှင့် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တိတိကျကျ ဖေါ်ထုတ် တင်ပြနိုင်သူမရှိဘူးသေးပေ။ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံ မူ၊ ပင်လုံ သဘောတရားတို့မှာ timeless principles ခေါ် ခေတ်အချိန်အခါမရွေး မှန်ကန်သော ဒီမိုကရေစီ မူများ တန်ဘိုးများသာဖြစ်ပေသည်။ တချို့ကလည်း ပင်လုံစာချုပ် ဟူသည်မှာ သဘောတူ စာချုပ် သက်သက် တခု မျှသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော အာဏာ ခွဲဝေရေး စသည်တို့ ဘာမှ အတိအကျ မပါဝင်ကြောင်း၊ ထိုစဉ်ကာလ အင်္ဂလိပ် ဘုရင်ခံကောင်စီ တွင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် များ ကို ထည့်ပေးရန် သဘောတူသည့်သဘော လောက် သာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်များ အတွက် ဘဏ္ဍာရေး များ ထောက် ပံ့ ပေးရန် လောက် သာပါရှိ ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပင်လုံဝါဒကို ဆန့်ကျင်သည့် စစ်ဝါဒီတို့ အကြိုက် သပုတ်လေလွင့် ဝေဖန်ပြောဆိုလာ သူတို့ ယနေ့ အချိန်အခါတွင်ပေါ်ပေါက်လာရသည်မှာ အကြောင်းမဲ့သက်သက်တော့မဟုတ်တန်ရာပေ။ အမှန်မှာ ပင်လုံသည် သာမန်စာချုပ် သက်သက်မဟုတ်မူပဲ ခေတ်သစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံအုပ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပင်လုံစာချုပ် နှင့် ပင်လုံစာချုပ်ကိုအခြေခံသည့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး အခြေခံမူ (ရ)ချက်တို့ကိုပူးတွဲလေ့လာ ပါက ပိုမို ခိုင်မာစွာ သိသာ ထင်ရှား လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မကျဆုံး မီရေးသားခဲ့သည့် အခြခံဥပဒေ ပထမမူကြမ်းသည်လည်း ပင်လုံစာချုပ်နှင့် သူ၏လမ်းညွှန်ချက်(ရ)ချက်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း အချက်တို့ကို Vansangva Library (www.vansangva.com) တွင်အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဤနေရာ တွင် ဆက်လက် မ ဆွေးနွေး တော့ပါ။ အောက်ဆုံးတွင်ဖေါ်ပြထားသော လင့်များတွင် ပြည့်စုံစွာဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။(၂)
အင်တာနက် စာမျက်နှာတခုတွင်လည်း ပင်လုံစာချုပ်ဟူသည်မှာ ရှမ်းစော်ဘွားများမှ အာဏာမစွန့် လွှတ်လိုသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ကအခြေအနေအရ လိုက်လျော ကာ ထိုးခဲ့ရသယောင် ဗမာ ပညာရှင် တဦး မှ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရေးသားခဲ့ဘူးသည်။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဟူသည့် သဘော သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ပင်လုံစာချုပ် ၏ အချက် နံပတ် (ရ)တွင် “တောင်တန်းဒေသရှိ ပြည်သူတို့သည် ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်များတွင် အခြေခံ အခွင့်အရေးများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိ ခံ စားစေရမည်“ ဟူ၍အတိအလင်းဆိုထားရာ ပဒေသရာဇ်စနစ်ဟောင်းကို ဆက်လက် ထိမ်းသိမ်းရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမဟုတ်မူပဲ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သစ်ကိုထူထောင်ရန် ရှမ်းစော်ဘွားများ ကိုယ်တိုင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သဖြင့် ယင်းပညာရှင်ကြီး၏ အဆိုမှာ အခြေအမြစ်မရှိ၊ ပကတိ အမှန်တရားနှင့် ပါစင်အောင် လွဲနေကြောင်း အထင် အရှား သက်သေ ထူ နိုင်ပါသည်။
ပင်လုံသည် အနှစ် ၆ဝ ကျော်ကြာ မြင့်သွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်ကို အခြေခံ ပြီး စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်းသည် ခေတ်နှင့်မလျော်ညီ ဘောင်မဝင်တော့ ကြောင်း၊ အခြေခံဥပဒေ (၂ဝဝဂ) သာလျင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောသံ များ လည်းသဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ ယင်းအဆိုသည် မည်မျှ မှန်ကန်မှု ရှိသနည်း။ ယနေ့ ပြည်သူတို့ က ပင်လုံ ၏ အခြေခံမူ များဖြစ်သော ပူးပေါင်းရေး၊ တန်းတူရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဖက်ဒရယ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တောင်းဆိုသံများ ရပ်စဲသွား သည်မရှိ သည့်အပြင် ယင်းတောင်းဆိုမှုများသည် အတောမသတ် ပို၍ပို၍ ကျယ်လောင် လာခဲ့သည် ကိုထောက်ပြီး ဤအဆိုသည် မှန်ကန်မှု အလျဉ်းမရှိကြောင်း အခိုင် အမာ သက်သေထူနိုင်ပါသည်။ ပင်လုံ ကို သေးသိမ် အောင်၊ ပင်လုံကို မှေးမှိန် အောင် ပြောဆိုကြသူများ သည်၊ ပြည်သူတို့၏ ပင်လုံ တကျော့ ပြန်ခရီးကို နှောင့်နှေး ကာ နောက်ထပ် ကမ္ဘာနှင့်ချီပြီး ကြာမြင့်အောင် ရည်ရွယ်ဟန် ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ တရား များ နှင့် ပြီးသောပင်လုံ သမိုင်းကျောက်တိုင်ကို မည်သူမျှဖြိုခွဲ ဖျက်စီး နိုင်စွမ်း မည်မဟုတ်ပေ။
ပင်လုံမူ၊ပင်လုံ ကတိကဝတ် တို့တွင် “ခွဲထွက်ရေး” ကိုဇောင်းပေးထားသယောင် ထင်ယောင်ထင်မှား ပြောဆိုကြပြန်သေးသည်။ သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ် ပါ စာသားများ ကို အသေအခြာဖတ်ကြည့် ပါက “ခွဲထွက်ခွင့်” “ခွဲထွက်ရေး” ဟူသော စကားလုံးများလုံးဝမပါရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဤ အဆိုသည်လည်း မသိနားမလည်သော ပြည်သူအချို့အားလှည့်စားထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ သက်သေထူနိုင်ပါသည်။
တချို့ကလည်း ပင်လုံတွင်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်မှာ ရှမ်း၊ချင်း၊ကချင်၊ဗမာ သာဖြစ်သဖြင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မပါ ရှိကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်သော “ပင်လုံထက်ပိုမိုသာလွန်သော” ညီလာခံကြီးတရပ်ကိုပြန်လည်ကျင်းပရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို ကြ သည်။ အမှန်အားဖြင့်မူ ကျွန်တော်တို့၏ ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စု သမိုင်းတွင် တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကလည်း ပြည်ထောင်စုကြီးမှ ခွဲထွက်ကာ သီးခြားသမ္မတ နိုင်ငံများတည်ဆောက်ရန် မတောင်းဆိုပဲ ပြည်နယ်အသီးသီး တောင်းဆို ကာ ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဆက်လက်ပါဝင်လာကြသည်မှာ ပင်လုံကတိကဝတ် တို့ ၏ ပူပေါင်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ရှိခဲ့သောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ တနည်း အား ဖြင့် နောက်ပိုင်းမှ ပြည်နယ် အဖြစ် ပါဝင်လာကြသော ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်၊ ရခိုင် အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ပင်လုံကို ယုံကြည်၍ ဆက်လက်ပြီး တနည်းတဖုံ အတည်ပြု သွားကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်သမိုင်းကြောင်းများ မတူညီကြသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ သည် ပင်လုံ ကတိကဝတ်အပေါ်တွင်အားလုံးစုစည်းပြီး တူညီသော၊ တခု တည်း သော ခေတ်သစ် ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး၏ သမိုင်းကို စတင် ရေးသား နိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကို ပြည်နယ် (၁၃) ခုနှင့် စတင်ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ် အသစ်များပါဝင်လာရာ ယနေ့ ပြည်နယ် (၅ဝ) ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသော ပြည်ထောင်စုတခုဖြစ်လာခဲ့ရာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကြီးကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြသော ပြည်နယ် (၁၃) ခုနှင့်သာ သက်ဆိုင် သည်ဟု ဆို၍မရပေ။ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သော ပြည်နယ် (၃ရ) ပြည်နယ်တို့သည်လည်း ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီလက်အောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော ကနဦး (၁၃) ပြည်နယ် တို့ ၏ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းပါ အခွင့်အရေးများ မျှော်မှန်းချက်များ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ကနဦးစတင်ထူထောင်ခဲ့ကြစဉ်က ချမှတ်ခဲ့သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု သဘောတရားများ ကိုလက်ခံ ယုံကြည် ကြ၍ သာပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်း၎င်းပင် ပင်လုံ စာချုပ်ကို ကို ကနဦး ရေးထိုး ခဲ့ကြသည့် ချင်း၊ရှမ်း၊ဗမာ၊ ကချင် တို့နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်မူပဲ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဆက်လက် နေထိုင်သွားရန်ဆန္ဒ ရျိကြသည့် အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှင့် ပါ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆက်နွှယ် သက်ဆိုင်နေပါသည်။ ပင်လုံကတိကဝတ် နှင့် ပင်လုံမျှော်မှန်းချက် တို့သည် လည်းထိုနည်း၎င်းပင် ကျွန်တော်တို့၏ ပြည်ထောင်စု ကြီး အရှည်သဖြင့် တည်တန့်ခိုင်မြဲရေး အတွက် ခိုင်မာသော သမိုင်း ကျောက်တိုင် တခုဖြစ်ပေသည်။
ဗမာ တိုင်းရင်းသား တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်
ပင်လုံစာချုပ်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအရေးသက်သက်နှင့် သာသက်ဆိုင်သည် မဟုတ်ပေ။ ပင်လုံစာချုပ်သည် ဗမာ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအားလုံး တို့၏ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးသော သမိုင်းဝင် နိုင်ငံရေးစာတမ်းတခုဖြစ်ပေသည်။ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ကျွန်သ ဘောက် ဘဝတွင် အတူတကွကျရောက်ခဲ့ကြရသည့် ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်း သား လူမျိုးအားလုံးတို့သည် လွတ်လပ်ရေး ကိုသာ အငန်းမရ လိုချင် ခဲ့ ကြ သည်။ ထိုစဉ်ကာလ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ကိုလိုနီစနစ်များဖျက်သိမ်းရေးကို ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ မှကမကထပြုဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုလိုနီ လက် အောက်ခံ လူမျိုးများ နိုင်ငံများတွင် ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် လွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့် ပြန်လည်ရရှိရေးသည် အဓိကကျသော စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ လူမျိုးများ နိုင်ငံများတွင် ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် လွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့် ကိုကမ္ဘာ နှင့် အဝှမ်း လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုလာသည်နှင့်အမျှ၊ သူတပါးနိုင်ငံ အားနယ်ချဲ့ ကာ ကိုလိုနီကျွန်ပြု သည့်စနစ်ကို အပြီးအပိုင်ဖျက်သိမ်းရန်အတွက် self-determination ခေါ် “ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်” သည် မဟာဗျူဟာ ကျသော သော့ချက် စကားလုံး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၃)
တနည်းအားဖြင့် လွတ်လပ်စ နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် တဦး၏ လွတ်လပ်ရေး ကို တဦး အပြန်အလှန် လေးစားအသိအမှတ်ပြုကြပြီး “ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်” ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ကာ နိုင်ငံကြီးသည်ငယ်သည်မဟူ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အဖြစ် တန်းတူရည်တူ ပါဝင်လာကြပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိမ်းသိမ်း တည်ဆောက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးများ ကိုဖန်တီးခဲ့သည့် ကိုလိုနီ စနစ်ဆိုး များ ချုပ်ငြိမ်းကာ ငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာကို တည်ထောင်ရန်အတွက် အချုပ်အခြာအာဏာရှိသော နိုင်ငံ အသီသီး လူမျိုးအသီးသီး တို့၏ “ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်” သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်လာသော နိုင်ငံတို့ အနက် လူမျိုးတမျိုးတည်းနေထိုင်သောတိုင်းပြည်များသည် nation state ခေါ် အမျိုးသား နိုင်ငံများ အဖြစ် သမ္မတ နိုင်ငံများ ကိုထူထောင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ အစရှိသည့် multi-national states ခေါ် လူမျိုး ပေါင်းစုံနေထိုင်သော နိုင်ငံများတွင်မူ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအသီးသီး အတွက် internal self-determination ခေါ် နယ်တွင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ နယ်တွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိသည့် ပြည်နယ်များ အဖြစ် ပူပေါင်းကာ “ပြည်နယ်ပေါင်းစု” ပြည်ထောင်စုစနစ်အားဖြင့် ပြည်နယ်ကြီးသည် ငယ်သည်မဟူ တန်းတူရည်တူ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင် ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် လူမျိုး ပေါင်းစုံနေထိုင်သော နိုင်ငံများအတွင်း လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ကင်းရှင်းကာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုပါ မြှင့်တင် ထိမ်းသိမ်း တည်ဆောက်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်များ မှေးမှိန်ကာ ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒ သည် သာကြီးစိုးခဲ့ပြီး nation state ခေါ် လူမျိုးတမျိုးတည်း နေထိုင်သောနိုင်ငံတခုပုံသဏ္ဍန်သို့ အတင်းအဓမ္မ အသွတ်သွင်းခံ ခဲ့ကြရသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတို့၏ နဂိုရှိရင်းစွဲ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တို့ ကိုပါဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရသည်။ တဆက်တည်းတွင် ဒီမိုကရေစီ အခြေခံတရားများ ပါ ဆိပ်သုဉ်းကာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်း လိုက်သည့် အချိန်မှစပြီး အများစုကြီးဖြစ်သော ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏ အများစုအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မိမိတို့၏ နဂိုရှိရင်းစွဲ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် – တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူတို့ ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲသော အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ကို၎င်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် – တနည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကို မိမိတို့ဆန္ဒ အလျောက်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့် ကို၎င်း ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။ ရရှိပြီးသား လွတ်လပ်ရေး ကိုပြန်လည် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တို့၏အရေးသည် ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏အရေး နှင့်ခွဲခြား၍ မရအောင် နက်နက် ရှိုင်းရှိုင်းဆက်စပ်နေသည်။ ဗမာ နှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နှင့်ဗမာ ဘဝတူ တလှေတည်း စီးခဲ့ကြည်မှာ နှစ်ပေါင်း ရာစုနှစ်ချီ ကြာ မြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် တဦး ကိုတော့ လွတ်လပ်စေ၊ နောက်တဦးကိုတော့ ကျွန်ဘဝတွင်နေစေ ဟူ၍ ခွဲခြား အုပ်ချုပ် ၍မရစကောင်းပေ။ ပင်လုံ တွင်လွတ်လပ်ရေး ကို တန်းတူ ရည်တူ အရယူခဲ့ကြသဖြင့်၊ လွတ်လပ်ရေး၏ အသီးအပွင့်တို့ကိုလည်း တန်းတူ ရည်တူခံစားခွင့် ရှိကြရပေမည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ က မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် များဆုံး ရှုံးလျင်၊ မကြာမီသောကာလတွင် ဗမာ တိုင်းရင်းသား တို့ ကပါ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ ကို တဆက်ထည်းဆိုသလိုဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့၏ သမိုင်းကအခိုင်အမာ သက်သေ ထူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
လူမျိုး ပေါင်းစုံနေထိုင်သော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတခုတွင် လူမျိုးအသီးသီး ဒေသအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ လူမျိုး၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့များ နှင့်သော်၎င်း၊ မိမိတို့ နေထိုင်ရာပထဝီဒေသနှင့် ၄င်း ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေများကို အားလုံးပါဝင်ရေးဆွဲပြီးသဘောတူပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြသည့် “ပြည်နယ်ပေါင်းစု” ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အခြေခံဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်ပဲ ပြည်နယ်အစိုးရတို့က ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့် ရှိရမည့်အပြင် အုပ်ချုပ်ရာတွင်လည်း မိမိတို့၏ အစိုးရ၊ မိမိတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကို မိမိတို့၏ ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခန့်အပ် နှိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိသော လူမျိုးသည် လွတ်လပ်သည့်လူမျိုးမဟုတ်ပေ။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရန်အတွက် အစိုးရလည်းရှိရပေမည်။ အစိုးရ မရှိ သော လူမျိုးသည် လွတ်လပ်သော လူမျိုးမဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇) အရ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ် များအတွက် မိမိတို့၏ အစိုးရ၊ မိမိတို့၏ ခေါင်းဆောင်ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ကြပေ၊ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲကို ဝန်ကြီးချုပ်မှခန့်အပ်ရသဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ကို ဆုံးရှုံးကာ Internal Colony ခေါ် ပြည်တွင်း ကိုလိုနီ ကျွန်သပေါက် ဘဝ ကိုကျရောက်ခဲ့ကြရသည်။ ပြည်သူတို့ ကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်သော ကိုယ်ပိုင် အစိုးရမရှိသဖြင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်း ခွင့်လည်းမရှိတော့ပေ။ တနည်းအားဖြင့် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ကကျွန်သဘောက်ဘဝမှ လွတ်မြောက် လာကြ ခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တို့ အတွက် လွတ်လပ်ရေး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးကိုအငန်းမရ၊ အလျင်အမြန်လိုချင်၍ ပင်လုံစာချုပ် အားဖြင့် ဗမာ နှင့်ပူးပေါင်းကာရေးထိုးခဲ့ကြသော်လည်း၊ လွတ်လပ်ရေး ကိုမရပဲ၊ ဗမာ ကိုလိုနီ ကျွန် သပေါက် ဘဝကို ရောက်အောင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြ သကဲ့သို့ဖြစ်သွားရသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် များ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသဖြင့် လွတ်လပ်သော လူမျိုး များ ဟူ၍ မခေါ်ဆိုနိုင်တော့ပေ။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြစဉ်က ဗမာတိုင်းရင်းသားတို့၏ အခွင့်အရေး များ ကိုထည့်သွင်း ထားခြင်းမရှိပဲ Frontier Areas များမှ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ကချင် တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တို့ကိုသာကွက်ပြီး အာမခံကာ သဘောတူ ချုပ်ဆိုခဲ့ သည်မှာ ယနေ့ ဗမာ တိုင်းရင်းသား တို့ကိုယ်တိုင် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးရသည့် အခြေသို့ ကျရောက်ရန် သမိုင်းဟာကွက်တခု ဟုတ်မဟုတ် တွေးတောစရာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပေသည်။ အများစုကြီးဖြစ်သော ဗမာပြည်သူ တို့ရွေးကောက် တင်မြှောက် သည့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဟူ၍ မရှိခဲ့သည်မှာ ကြာငြောင်း ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဗမာ စစ်အာဏာရှင် တို့သာ ကြီးစိုးခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီစံအရ ပြည်သူတို့ကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလား ရွေးကောက်တင်မြှောက် သောခေါင်းဆောင် သည်သာလျင်စစ်မှန်သော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး အာဏာရှင် ဟူသည်မှာ ခေါင်းဆောင်မ ဟုတ်ပေ။ အာဏာရှင် စနစ် ကိုပြည်သူတို့မရွေးချယ်ခဲ့ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် (ရ)ချက် မှ အချက် (၃) တွင်“ ပြည်နယ်များ အပါအဝင် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့၏ အာဏာသည် တိုင်းသူပြည်သားများထံမှဆင်းသက်ရမည်” ဟူသော မူဝါဒ ကို ချိုးဖေါက်ခဲ့ကြသဖြင့် ဗမာအပါအဝင် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ သည်မိမိတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
ပြည်သူတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ကိုထင်ဟပ်စေသည့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ခွင့်များ ကင်းမဲ့လာသည်၏ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် ပြည်သူတို့သည် မိမိတို့၏ ဆန္ဒ အလျောက် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိသဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင်ဝင်သွားရသည်။ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် အတွက် ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့တွင် ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များမရှိ၍မဖြစ်ပေ။ ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာကြီး ကို ထူထောင်ရန်အတွက် နိုင်ငံများ၊ လူမျိုးများသည် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် များရှိရမည်ဖြစ်သလို၊ ငြိမ်းချမ်းသော တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ကြီးအဒွန့်ရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲရေး အတွက် ဗမာအပါအဝင်လူမျိုးတိုင်းသည် လည်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် များရရှိခံစား ကြရပေမည်။ မည်သည့်လူမျိုး၊မည်သည့် ဒေသကိုမျှ သာစေ၊နာစေ ခွဲခြား၍မရစကောင်းပေ။ လူမျိုးတမျိုးကိုတော့ ပြည်နယ်၊ နောက်တမျိုးကိုတော့ တိုင်းအဆင့်သာသာ တွင်ထား၍ မရစကောင်းပေ။ “ပြည်နယ်ပေါင်းစု” ပြည်ထောင်စုကြီး ကို ထူထောင်ကာ ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် တန်းတူရည်တူ ပြည်နယ်များ အဖြစ် ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး များခံစား ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မသိ ကျိုးကျွံ မပြု စကောင်းသော ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး၏ နိယာမတရားများ ဖြစ်ပေသည်။ ဤနိယာမတရားကို မသိကျိုးကျွံပြုသည်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အဖက်ဖက် တွင် အတောမသတ်နိုင်သောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စမြဲဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်၏ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်၊ တပ်မတော်၏ ဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သည် အနာဂတ် ပြည် ထောင်စု အတွက် နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာ ကောင်းတရပ်ကိုချမှတ်ပေးခဲ့ဘူးသည်။ သူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့သော ပင်လုံမူ သည် သာလျင် ကျွန်ပ် တို့ ပြည်ထောင်စုကြီး၏ တခုတည်းသော ဒီမိုကရေစီ အခြေခံအုပ်မြစ်ဖြစ်ပေသည်။ ယင်းအခြေခံအုပ်မြစ် အရ ကျွန်သဘောက် ဘဝမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ယင်းအခြေခံအုပ်မြစ် ပေါ်တွင် ပင်လုံပြည်ထောင်စုကြီး ကိုစတင် ထူထောင် ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ခုလ ပန်းခြံတွင် ထီးထီးမားမား တည်ရှိနေ သော လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်တွင် ရေးထိုးထားသည့် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းသည်လည်း ယင်းပင်လုံ အခြေခံအုပ်မြစ် ပေါ်တွင် စိုက်ထူ ရေးသား ခဲ့ကြရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယင်းလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း ၏ အမှတ်စဉ် (၅) တွင် အောက်ပါအတိုင်း အတိအလင်း ကဗျည်းထိုး ရေးသားခဲ့ကြသည်။
“ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီးသည် မည်သူ တဦးတယောက် တဖွဲ့ တသင်း၏ အမွေအနှစ်မဟုတ်၊ မည်သူတဦးတ ယောက်တဖွဲ့ တသင်း၏ ပုဂ္ဂ လိကအပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၊ မည်သူတဦး တယောက် တဖွဲ့တသင်းက ချုပ်ကိုင်အနိုင်သိမ်းယူ အကျိုး ခံစားအပ်သော နိုင်ငံမဟုတ်၊အတိတ် ကာ လလည်းကောင်း၊ ယခုမျက် မှောက်တွင်လည်းကောင်း၊နောင်လာလတံ့ သော အနာဂတ်ကာလ ၌ လည်းကောင်း၊ ငါတို့ပြည်ထောင်စုကြီး အ တွင်း ၌ မှီတင်း နေထိုင်ကြသောကြီးငယ်ဝေးနီး ကျား/မ မခြား သစ္စာတော်ခံ နိုင်ငံသား ဟူသရွေ့ ဒို့၏အမွေအနှစ်အပိုင်ပစ္စည်း အကျိုးခံစားရာ ဖြစ်သည် ဟူ သော လူ့ဘာသာ လူ့တရား နှင့်အညီကမ္ဘာဦးကာလ လူတို့၏ စည်းရုံးမှု ၌လူအပေါင်းတို့၏ သဘောဆန္ဒအရလူ အဝှမ်း၏ အကျိုးကို ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက် နိုင်အံ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးကောက်၍ သမ္မတ တင်မြှောက်ကြသော မဖောက်မပြန် မစွန်း မငြိပကတိသန့်ရှင်းဖြူစင်သော မူလလူ့ဝါဒ နှင့် လျော်စွာ စည်းကမ်းဥပဒေ သေချာထင်ရှားစွာပိုင်းခြားသတ်မှတ်တူညီသော တရား တူညီသောအခွင့်အရေးတူညီသော အဆင့် အ တန်း အားဖြင့် ကမ္ဘာအရှည် တည်စိမ့် သောငှာ လူအပေါင်းတို့၏ ဆန္ဒသာလျှင် အဓိကဖြစ်သော သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်းဟူသော မြတ်သော အဖြစ်ကို လက် ဆုပ်လက်ကိုင်ငါတို့အပိုင်ရပြီ။“
ပင်လုံလမ်းမှသွေဖီလာခဲ့ကြပြီး လွတ်လပ်ရေး၏ အခြေခံအုပ်မြစ်၊ ပြည်ထောင်စုကြီး၏ အခြေခံအုပ်မြစ်၊ ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုပ်မြစ် ဖြစ်သော ပင်လုံ ဟူသည့် အခြေခံအုပ်မြစ် ကိုပစ်ပယ်ခဲ့ကြသဖြင့် ယင်း လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်း ကြီး သည်လည်း ယနေ့ အချိန်အခါတွင် ကဗျည်း အက္ခရာများသက်သက် အဖြစ်ကျန်ရှိခဲ့ပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအပေါင်းတို့ မှော်မှန်းခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းသာယာသော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြရသည်။
အဆောက်အဦးတခု၏ ခြေခံအုပ်မြစ် (foundation) ဒီဇိုင်းကိုကြည့် လိုက်ရုံနှင့် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးသော ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ (သို့မဟုတ်) ဗိသုကာ တဦးသည် ယင်းအခြေခံအုပ်မြစ်ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် ဆောက်အဦးသည် အထပ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပြီး ခန့်ငြား ထည်ဝါသော မိုးထောင်တိုက် အမျိုးအစားလား၊ သာမန် နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်တိုက် အမျိုးအစားလားဆိုသည်ကိုချက်ခြင်း သိမြင် မှန်းဆနိုင် သကဲ့သို့ ပင်လုံစာချုပ်တွင်ပါဝင်သော ကျစ်လစ် သိပ်သည်းသည့် နိုင်ငံရေးမူဝါဒ များ ၏ အတိမ်အနက်ကိုကြည့်ပြီး၊ ပင်လုံ အခြေခံ အုပ်မြစ်ပေါ် တွင် တည်ဆောက်မည့် ပြည်ထောင်စုကြီး သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Federal Republic of Germany ခေါ် ဂျာမန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ နိုင်ငံ များ ကဲ့သို့ ခန့်ငြားထည်ဝါသော ပြည်ထောင်စု ကြီးတခုကိုတည်ဆောက် တော့မည့် တိုင်းပြည်တခု၏ အခြေခံအုပ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ကိုရင့် ကျက်သော နိုင်ငံရေးသမားတဦးမှန်လျင် ခန့်မှန်းရိပ်မိ မှန်းဆ နိုင် ပေလိမ့်မည်။
ယိုင်နဲ့တိမ်းစောင်းနေသော လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ကြီးအားပြန်လည်တည့်မတ်ရန်အတွက် ယင်းကျောက်တိုင်ကြီး၏ အောက်ခြေ အခြေခံအုတ်မြစ်တွင် ပင်လုံမူတို့သည် မပျောက်မပျက် အခိုင်အမာတည်ရှိနေပါသေးသည်။ ပင်လုံမူကို လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့ အတူတကွ ပြန်လည်စုပ်ကိုင်ကာ ပင်လုံလမ်းကိုပြန်လည် လက်တွဲ လျောက်လှမ်းကြမည်ဆိုလျင် ယိုင်နဲ့တိမ်းစောင်းနေသော လွတ်လပ်ရေး ကျောက်တိုင်ကြီး သည်လည်း ပြန်လည်တည့်မတ်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက် တင်ပြဆွေးလိုက်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က လမ်းညွှန်ခဲ့သည်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးလျင် “သူများ ခြေလှမ်းတလှမ်းလှမ်းရင်၊ ကျွန်တော်တို့ ကခြေလှမ်း ဆယ်လှမ်းလှမ်းနိုင်ရမယ်” ဟူ၏။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် ကျွန်တော်တို့ သည် အရှေ့သို့ခြေလှမ်း ဆယ်လှန်း မလှန်း ပဲ အနောက်သို့ ခြေလှမ်းအလှမ်းတရာလှမ်းခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ကာလ အင်တာနက်ခေတ်တွင် အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများသည် ခြေလှမ်းကျဲကြီးများဖြင့် အီလက်ထြောနစ် နည်းပညာတို့ ၏ အကူအညီကို အသုံးပြုပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို မြန်ဆန်လွန်းလှသော အလျင် နှုန်းများဖြင့် ဖလှယ်ရင်း စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အဖက်ဖက်တွင် ကျွန်တော်တို့ ကို စက္ကန့် နှင့် အမျှ တဝီဝီ် ကျော်ဖြတ်ချန်လှပ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် သူများ ခြေလှမ်း တလှမ်းလှမ်းလျင်၊ ကျွန်တော်တို့ ကခြေလှမ်း အလှမ်းတရာလောက် မှ မလှမ်း နိုင်လျင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူသားတို့၏ ပစ္စုပ္ပန် ဘဝအတွင်းသို့ ပြင်းထန်လွန်းသော အမြန်နှန်းဖြင့် ဆောင့်ကာနင်းကာ ဝင်ရောက်လာ နေသော အနာဂတ် ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအား ဒရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်ကာ နိုင်ငံ အဝှမ်း ပွန်းပဲ့ထိရှမှုများ ကိုမကြာတော့သောကာလတွင် အတောမသတ်မြင်တွေ့ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ အရှိန် အဟုန် ဖြင့် ဝင်ဆောင့်ကာစိန်ခေါ်နေသည့် အပြောင်းအလဲများကို လက်နက်ဖြင့်၎င်း၊ အာဏာဖြင့်၎င်း ဟန့်တားနိုင်စရာကြောင်းမရှိပေ။ သူများ တကာ အင်တာနက် အဝေးပြေး လမ်းမကြီး ပေါ်တွင် တဝီဝီ ကျော်ဖြတ် နေစဉ်တွင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအား လှည်းကြမ်း ကြီး ပေါ်တင်ပြီး တအိအိ မောင်နှင်း ခေါ်ဆောင်ကာ ပဒေသရာဇ် ခေတ်ဟောင်း ဆီသို့ နောက်ပြန်လှမ်းနေ သော တောသူကြီး တို့ ခေတ်သည် ကုန်ဆုံးသင့်ပြီဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်ဆုံးအကြိမ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှလွတ်မြောက်လာသည့် အချိန်တွင် ဘီဘီစီသတင်းထောက်မှ သူမအား ဗမာ့ တပ်မတော်ကို ဖြိုခွင်းရန် ဆန္ဒရှိမရှိ ထိလွယ်ရှလွယ်လွန်းလှသောမေးခွန်းတရပ်ကိုမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဖြေမှာ လိုရင်း တိုရှင်း ရိုးစင်း လှပါသည်။ “ကျမအနေ နဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကိုဖြိုခွင်းဖို့ ဘယ်တုံးကမှ ဆန္ဒ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တပ်မတော်က ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ ကို အကောင် အထည် ဖေါ်ပေးဖို့ ကိုသာ ကျမ တစိုက်မတ်မတ်ပြောခဲ့တာပါ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒအစစ်အမှန်အတိုင်း ငြိမ်းချမ်း သာယာသော ပြည်ထောင်စုကြီးကို ပုံဖေါ် တည်ဆောက် ရန်အတွက် တပ်မတော်၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် က ပင်လုံ တွင် ၄င်း၊ သူ၏ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် (ရ) ချက်တွင်၎င်း အတိအလင်းအုပ်မြစ်ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် များအနေနှင့် တပ်မတော်၏ဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် ခင်းပေးခဲ့သည့် ပင်လုံလမ်းပေါ်သို့ ပြည်သူ တို့ကို ဦးဆောင် ကာ အတူ တကွ မလျောက်လှမ်းနိုင်စရာ ခိုင်လုံသောအကြောင်းတစုံတရာပြစရာ မရှိပေ။ ပင်လုံလမ်းကိုလိုက်လာသည်နှင့်အမျှ တပ်မတော် ၏ ဖခင် ကြီး ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ပင်လုံခေတ်မှာကဲ့သို့ တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူ ပြည်သူနှင့်တပ်မတော်သည် တသားတည်း ဖြစ်သွား ကြမည်မှာ ဧကန်မလွဲပေ။
အဘိုးမဖြတ်နိုင်သော ပင်လုံ အမွေအနစ် မှရရှိခံစားခဲ့ရသော ဆုမြတ်အကျိုးကျေးဇူးတို့ကို လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူတို့ မမေ့မပျောက် အတူတကွ ဆက်လက် ထိမ်းသိမ်း ကြပါစို့။ ပင်လုံ သည် ကျွန်တော်တို့ ၏ အတိတ်၊ ကျွန်တော်တို့၏ ပစ္စုပ္ပန်၊ ကျွန်တော်တို့ ၏ အနာဂတ် ဖြစ် ပေ သည်။
(၁) (A Theory of Universal Democracy empowers cultures and communities across the world to custom design democracy in consonance with their traditional values. For example, the [author] makes concrete proposals for Muslim countries to democratize their constitutions without accepting Western values and without violating the principles of Islamic law. A Theory of Universal Democracy. Beyond the End of History. By L. Ali Khan)
(၂) ပင်လုံစာချုပ် (၁၉၄ရ)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#1
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ လမ်းညွှန်ု (ရ) ချက်။ http://vansangva.com/vansangva-library/#2
ဗိုလ်ချုပ် ၏ အခြေခံဥပဒေ ပထမ မူကြမ်း (၁၉၄၇)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#3
(၃) The United Nations General Assembly adopted United Nations General Assembly Resolution 1514 (XV) under titled Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples provided for the granting of independence to colonial countries and peoples in providing an inevitable legal linkage between self-determination and its goal of decolonisation, andapostulated new international law-based right of freedom also in economic self-determination.
အခြားဆက်စပ်သော “ပင်လုံဆောင်းပါးများ“ ကို http://vansangva.com/category/panglong-articles/ တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
« The Curse of Panglong
Warmest Season’s greetings »